एसियाली खेलकुदको तयारी कस्तो छ ? | Sagarmatha TVSagarmatha TV एसियाली खेलकुदको तयारी कस्तो छ ? | Sagarmatha TV
एसियाली खेलकुदको तयारी कस्तो छ ?
बुधबार, साउन ९, २०७५
काठमाडौं । आगामी भदौ २ देखि इन्डोनेसियामा हुने १८औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताका लागि यतिबेला नेपाली खेलाडी पनि प्रशिक्षणमा व्यस्त छन् । नेपालले सहभागिता जनाउने २८ खेलका खेलाडी प्रशिक्षणमा जुटेका हुन् । प्रतियोगिताको तयारीका लागि सबै खेलको तयारी विभिन्न स्थानमा भइरहेका छन् ।
अधिकांस खेलको तयारी स्वदेशमा भए पनि ६ खेलको तयारी भने विदेशमा भइरहेको छ । थप २ टिम पनि अभ्यासका लागि वैदेशिक भ्रमणमा जाने तयारी गरिरहेका छन् । एसियाली खेलुकदमा नेपाललाई पटक–पटक पदक दिलाएको तेक्वान्दोले यसपटकको तयारी दक्षिण कोरियामा भइरहेको छ । नेपाली टिम गत वैशाख तेस्रो साता कोरिया प्रस्थान गरेको थियो । दक्षिण कोरियाको सिओलमा ५ पुरुष र ५ महिला गरी १० खेलाडीले प्रशिक्षण गरिरहेका छन् ।
पुरुष खेलाडीमा सागर गुभाजु, वीरबहादुर महरा, ज्ञानेन्द्र हमाल, भूपेन श्रेष्ठ र अनोज पुजारी छन् । महिलामा अस्मिता खड्का, निमा गुरुङ, ज्ञानी पुजारा, संगीता बस्याल र निशा रावल छन् । प्रशिक्षकमा संगीना वैद्य छिन् । उनीहरुले छुङ वो मार्सल आर्ट्स इन्स्टिच्युटमा प्रशिक्षण गरिरहेका छन् ।
त्यस्तै राष्ट्रिय बक्सिङ टोलीले थाइल्याण्डमा प्रशिक्षण गरिहेको छ । प्रशिक्षण दौरान टिमले थाइल्यान्डमा हुने थाइल्यान्ड ओपन इन्टरनेसनल बक्सिङ च्याम्पियनसिप (किङ्स कप) मा पनि सहभागिता जनाएको छ । नेपाली खेलाडीमा महिलातर्फ विमला श्रेष्ठ ५१ केजी, संगिता सुनार ५७ केजी र पुनम रावल ६० केजीमा छन्। पुरुषतर्फ तेजबहादुर देउवा ४९ केजी, प्रेम चौधरी ५२ केजी, विमल रोका ५६ केजी र एकबहादुर घलेले ६० केजी तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । त्यस्तै, भूपेन्द्र थापाले ६४ केजी, विष्णु घलेले ६९ केजी र दिपक श्रेष्ठले ७५ केजी तौलसमूहमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । सागकी स्वर्ण विजेता जुडो खेलाडी फुपुल्हामू खत्रीले एसियाली खेलकुदको तयारी जापानमा गरिरहेकी छिन् ।
एसियाली खेलकुदमा पेनकेकमा नेपालबाट विवेककुमार विकले ६०–६५ केजी तौलसमूहमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । हाल उनी प्रशिक्षणका लागि सिंगापुरमा छन् । त्यस्तै एसियाली खेलकुदमा नेपालले स्केटबोर्डमा पहिलो पटक प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । नेपालका तर्फबाट फ्रि स्टाइल स्ट्रिटमा नेरिश थापाले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । उनी हङकङमा हुर्किएर त्यहाँको जुनियर च्याम्पियनसिप जितेकाले नेपालले स्केटबलमा राम्रो प्रदर्शनको आसा गरेको छ । प्रशिक्षणकै लागि केहीदिन अघि मात्र टेबलटेनिस टोली भारत प्रस्थान गरेको थियो ।
टोलीले भारतमा प्रशिक्षण गरिरहेको छ । प्रशिक्षणकै लागि कराते जापान जाने तयारीमा रहेको छ । भने फुटबल टोली थाइल्याण्ड जानेछ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले नेपाली टिमलाई साउन दोस्रो साता थाइल्यान्ड पठाउन तयारी गरिरहेको छ । एन्फा प्रवक्ता किरण राईका अनुसार नेपाली टिम आगामी साउन १५ देखि १९ भित्रमा थाइल्यान्ड पुग्नेछ । त्यहाँ पुगेपछि नेपालले थाइल्यान्डको टिमसँग अभ्यास खेल खेल्नेछ ।